Inka Badan 400 Oo Tahriibeyaal Ah Oo Lagu La’yahay Badda Talyaaniga | Duul News International
Inka Badan 400 Oo Tahriibeyaal Ah Oo Lagu La’yahay Badda Talyaaniga	(Duulnews)-Ugu yaraan 400 oo muhaajiriin ah ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen badda u dhexaysa Libya iyo Talyaaniga kadib markii ay quustay doon ay la socdeen dad gaadhaya 550 Qof.
Ilaalada Xeebaha Talyaaniga ayaa sheegay inay badbaadiyeen 144 Qof. Hawl gallo diyaarado qayb ka yihiin oo lagu baadi goobayo dadka maqan ayaa socda, iyadoo ilaalada xeebuhu sheegayso inay dad badani maqan yihiin marka loo eego cabbirka doonta ay la socdeen. Dadka la badbaadiyay ayaa sheegaya in doonta Caruur badani saarnayd.
Ururka Caalamiga ah ee Arrimaha muhaajiriinta(The International Organization for Migration), ayaa sheegay in haddii la xaqiijiyo dhimashada Dadkan ay tirada dadka ku dhintay badda ilaa 2014-ka ay noqonayso 3,072 qof oo badda ku safrayay, halka sannadkii ka horeeyay ee 2013-ka 700 ku dhimatay.
Hay’adda Qaxoontiga aduunka UNHCR, ayaa sheegtay in Ciidamada ilaalada Xeebaha Talyanigu ilaa Jimcihii badbadiyeen 8,500.
Inka badan 280,000 Muhaajiriin ah ayaa sharci darro ku galay xeebaha Yurub sanadkii la soo dhaafay waxaana ka kala yimaadeen Syria,Somalia iyo Eritrea.
war deg deg ah: in k badan 200 oo tahriibayaal ah oo dhintey kedib markay degtey doontii sidey badda Mediterranean -ka
Madaxda Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Somaliland Oo Kulan La Yeeshay Madaxda Hay’addaha, Shirkaddaha iyo Ururada